Iitweaks: Ukuya kwifomathi ebanzi | Martech Zone
NgoMvulo, Septemba 4, 2006 NgoMvulo, Agasti 24, 2009 Douglas Karr
Kudala ndisebenza kule mpelaveki kwiindawo ezimbalwa zomhlobo wam oseVancouver. Ngokwenza njalo, ndiqwalasele ngokunzulu amanani athile kwaye ndazijonga iindawo ezimbalwa zoyilo kwiwebhu. Ndithathe isigqibo sokwandisa ubeko lwam ukuze kube lula ukufunda. Ndiza kufaka uphando kule nto - ndixelele ukuba uyayithanda okanye uyayithiya. Andifuni ukucoca iindwendwe zam ezisebenzisa i-800 x 600 okanye ngezantsi, kodwa yi-3% kuphela yeendwendwe zam. Ngenxa yoko, andicingi ukuba lelona qela labafundi bam.
Njengoko ndiqhubeka nokusebenza kwezinye iisayithi zabaxumi, ndiza kusebenza nala macala amatsha kuxhomekeke kubaphulaphuli bawo. Ndiyanqwena uyayithanda!
Jan 13, 2007 kwi-1: 12 AM
Khange ndibubone ubeko lwakho oludala, kodwa ndiyayithanda le inomxholo ka-Anaconda. Ifonti ilula kakhulu emehlweni nayo ... .ngaba ngumgca weanaconda ongagqibekanga?
Juni 26, 2008 ngo-4: 06 AM
Ke, kubanzi kangakanani 'ububanzi'? Ndipapasha iifoto ezininzi kwibhlog yam kunye nobubanzi be480xx ngoku ibukeka incinci!